Nutrition – Page3– Healthy Life Journal
အသက် တစ်နှစ်နှင့် ငါးနှစ်ကြားအရွယ် ကလေးများနှင့် အာဟာရ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. တစ်နှစ်အထက်၊ ငါးနှစ်အောက်အရွယ် ကလေးတွေအတွက် အာဟာရဓာတ်မျှတစွာ ရရှိဖို့က အရေးကြီးပါလား ဆရာမ။ ဖြေ. တစ်နှစ်အထက်၊ ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ အာဟာရဓာတ်မျှတအောင် ရရှိဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်နှစ်အရွယ်က နည်းနည်းငယ်သေးတဲ့အတွက်...
သွေးမလှူမီနှင့် သွေးလှူပြီးချိန် သံဓာတ်ပြည့်ဝစေရန် စားသောက်သင့်သည့် အာဟာရ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း သွေးလှူတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကျန်းမာရေးကောင်းနေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နေထိုင်စားသောက်ပုံ စနစ်တွေရှိသလို သွေးလှူပြီးချိန်မှာလည်း ကျန်းမာနေစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သွေးမလှူမီ သံဓာတ်ပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာစေရန် နေထိုင်နည်းများ – အနီရောင်ရှိတဲ့အသားတွေကို စားပေးရပါမယ်။...
အမျှင်ဓာတ်က ဘာကြောင့် အရေးပါရသလဲ . . .
၊ လရိပ်မေ ၊ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေစားရင် သွေးတွင်းကိုလက်စထရောပမာဏကို လျော့ကျစေပြီး နှလုံးရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါတချို့ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအသောက်တွေကတော့ ဂျုံ၊ အာလူး၊ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်အမျိုးအစား အမျှင်ဓာတ်မှာ ပျော်ဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်နဲ့...
– စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပန်ကရိယဆိုတာ အစာခြေလမ်းကြောင်းစနစ်အတွက် အရေးကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဆစ်များတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ချေဖျက်ပေးရုံသာမက ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်၊ ပရိုတင်းနဲ့ အဆီချေဖျက်ရေးမှာလည်း ပါဝင်ကူညီပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ ပန်ကရိယရှိရင် ကိုယ်တွင်းမှာသကြားရယူမှုဟန်ချက်ညီပြီး အစာခြေလမ်းကြောင်းစနစ်ကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပန်ကရိယ(မုန့်ချိုအိတ်) ကျန်းမာဖို့အတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့...
အသည်းအစားထိုးထားသူ လူနာများအတွက် အာဟာရ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ အသည်းအစားထိုးလူနာတွေအတွက် ဘယ်လိုအာဟာရတွေ လိုအပ်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ ။ အသည်းရောင် စီရောဂါပိုးရှိတဲ့ လူနာတွေ၊ အရက်အရမ်းသောက်တဲ့ လူနာတွေမှာအသည်းက လုံးဝအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အခါ အသည်းအစားထိုးတာတွေလုပ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ အသည်းအစားထိုးထားတဲ့...
နှလုံးရောဂါ အမောဖောက်ပြီးနောက် စားသင့်သည့် အာဟာရ
၊ လရိပ်မေ ၊ နှလုံးရောဂါအမောဖောက်ခြင်း (Heart attack) လို့ခေါ်တဲ့ ဒီရောဂါဟာ နှလုံးကြွက်သားတွေအနေနဲ့ သွေးနဲ့အာဟာရ လုံလောက်စွာမရတော့ဘဲ ပျက်စီးလာတာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါထတာက မျှော်လင့်မထားဘဲ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှု အဖြစ်စေနိုင်ဆုံး ရောဂါဖြစ်တာကြောင့် နှလုံးရောဂါတစ်ကြိမ် အမောဖောက်ဖူးသူတွေအနေနဲ့ အထူးဂရုစိုက်ဖို့...
ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းနှင့် အာဟာရ
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိပါရစေ ဆရာမ။ ဖြေ. ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေမှာ ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာ အခန့်မသင့်ရင် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ချိန်မှာ...
၊ ကိုထက် ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း နေ့စဉ် တစ်နေ့ကို ကြက်ဥ ၉လုံးနဲ့အထက်စားပေးပါက မွေးလာတဲ့ ကလေး ဉာဏ်ရည် မြင့်မားနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကြက်ဥမှာ ကိုလင်းဓာတ်အများအပြားပါဝင်ပြီး ကိုလင်းဓာတ်ဟာ ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ မှတ်သားနိုင်စွမ်းတွေကို များစွာ အထောက်အကူပြုတယ်လို့...